केही पत्रपत्रिकामा हालका प्रधानसेनापतिको कार्यकाल थपिने, हुने वाला प्रधान सेनापति सक्षम नभएको भन्ने बिभिन्न आसयका अचम्मका समाचारहरू संप्रेषण भए । नेपाली सेनाका अधिकृतका योग्यताको कुरा गर्नु पर्दा आकाशका तारानै खसाल्ने कोनै छन् र? सबैको प्रशिक्षणको ब्यबस्था उस्तै उस्तै नैत हुन् । को राम्रो को नराम्रो भन्ने कुरा कस्को सम्बन्ध को संग छ र कस्ले कति मौका पाए भन्ने हो । जति नै गौरवशाली इतिहास भएको र सही ठांउमा सही मान्छे को पदस्थापन भन्ने नारा लगाए पनि केवल औंलामा गन्न सकिने मानिस मात्र त सक्षम र दक्ष हुने रहेछन् । जतिनै शून्य सहनशिलता र पक्षपात हुंदैन भने पनि नेपाली सेना प्राइभेट कम्पनी सरह नैत रहेको छ ।
आफ्ना मान्छे संधै काखमा र निरिह सैनिक ब्यक्तिहरू संधै पाखा नैत छन् । तलका दर्जाहरूमा सायद त्यति सारै बिभेद नहोला तर अधिकृतहरूको हकमा भने मुठ्ठिभरका कोही भने संधै मालामाल, सुख सयल त अधिकांश अरू बेशाहारा अधिकृतहरू कालापत्थर गए सरह कसैबाट लुकेको छैन । कठोर अनुशासनमा बस्नु परेको कारणबाट कसैले पनि बोल्ने कुरा भएन । रिपोर्टनै गरे पनि यिनै पावरवालाले सुन्ने हुन् , झन् खेदाइ र पेलाइमा पर्ने कसलाई पो रहर हुन्छ र ?
जरसाव, करसावका योग्यता र दक्षताको कुरा गर्ने हो भने, समग्रमा सबैको स्कुलिङ उहीनैत हो । सबै अधिकृतहरू तथा जरसाव करसावहरूले न्यूनतम योग्यताको तालिम अध्ययन नगरी पदोन्नती हुन पाउने संभावना छैन । कोही राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्ने होलान्, भगवानको कृपाले अमेरिका, बेलायत तालिम गरेका होलान्, त्यसो भन्दैमा उनीहरू अर्कै ग्रहबाट आएका अबश्य होइनन् । उन्नाइस / बीस होला तर कोही ब्यक्ति अति सक्षम र कोही कवाड भन्नु हास्यास्पद हुन जानेछ ।
सामान्यतया साधारण सेवामा कमाण्ड तथा स्टाफ तालिम उतिर्ण नगरे सम्म प्रमुख सेनानी दर्जामा पदोन्नती हुन पाइदैन। उनीहरूनै भबिष्यका कर्णेल जर्नेल वा प्रधान सेनापति हुन् । नेपाली सेनामा उपरथी दर्जामा पदोन्नती हुनको लागि गरिने एन.डि.सी. वा सो सरहका तालिम गरे पछिनै उमेरको फाइदा वा भाग्यको कारण अथवा म्यानुपुलेसन अनुसार अमूक ब्यक्ति प्रधान सेनापति बन्ने हुन् । हालका प्रधान सेनापति पनि भाग्यलेनै नेतृत्व तहमा पुगेको कसलाई थाहा छैन र ? कुनै ब्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्नु जरूरी छैन । उहाँ भन्दा अगाडिका प्रधान सेनापतिको कार्यकालमा पनि नेपाली सेना चलेकै थियो, साँच्चीकै गल्ती गर्ने ब्यक्तिहरूलाई सैनिक अदालतबाट वा बिभागिय कार्वाही भएका नै थिए, हो पत्रकार सम्मेलन गरेर छरपस्ट पारिएनन्।
अहिले त साना र निरिहलाई बलीको बोको बनाइएको छ। खैत नेपाली सेनाको बजेटको अन्यन्त दुरूपयोग गरी कमाउ धन्दामा लागेका उपत्यकामा मात्र १५/१६वटा घर हुने टिके लेखा उपरथी भूवन अधिकारी लाई कार्वाही गरेको? अरवौं घोटालामा मुछिएका पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई छुन सकेको छ उँहाले ? ९६००० फौजको लागि खुले आम रू. ११०० पर्ने ट्रयाक सुटलाई रू. २२०० मा हुकुमी शैलीले नेपाली सेनाको सबै कार्यालयलाइ राशनबाट बचेको रकम बाट स्थापना गरिएको प्राइभेट फण्डबाट अनिवार्य खरिद गर्न उर्दी लगाउँदा हालको प्रधान सेनापति (तत्कालिन भावी प्रधानसेनापति) कुन दूलामा हुनुहन्थ्यो? उहाँले यो ब्यापारबाट फाइदा लिनु भएको छैन भन्ने आधार के छ ? एक्काइसौं शताब्दीमा सबैले आँ गर्दा अलङ्कार बुझ्न सक्षम छन् ।
हत्केलाले सूर्य छेकेर छेकिदैन । ३५-३६ बर्ष सम्मको नोकरी अवधीमा कोही जर्नेल वा प्रधान सेनापति वा भावी प्रधान सेनापति सबैको ज्ञानको स्तर उस्तै नै हो । कसैलाई सगरमाथाको चूचूरोमा र कसैलाई मृतसागरको लेवलमा राख्नु केवल भ्रम पैदा गर्नु सिवाय केही होइन । कुनै कुनै भाग्यमानी अधिकृत तथा जरसाव करसावहरू अझै भनौं प्रधानसेनापतिका आफ्ना मानिसहरू उहाँकै खल्तीबाट संयुक्त राष्ट्र संघ मूख्यालय एवं अन्य मिशनहरूका बिभिन्न नियुक्तीहरूमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन्, नेपाली सेनाको लागि छुट्याएको कोटामा नियुक्ति पाउँछन्, र उनीहरूलाई देवत्वकरण गरिन्छ । त्यस्ता नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गरी नाम निकाल्न सक्ने योग्य ब्यक्तिहरू कति छन् कति नेपाली सेनामा !
त्यसैले नेपाली सेनामा कोही सधैं भरी चाहिने र कोही बेकम्मा भन्ने भ्रमको खेती नगरौं । समय र जिम्मेवारीले सबैलाई परिक्षण गर्नेछ साथै आफ्नो आङ्गमा भैंसी हिडेको नदेख्ने तर अर्काको आङ्गमा टाढैबाट जुम्रा पनि देख्ने प्रबृत्तीलाई इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ।
-नेपाली सेनाको भलो चाहने सकलदर्जा